हरे दैव – बालेनमात्र चिनेका पत्रकारलाई केको बैठक बस्यो नै थाहा रहेनछ ! – MySansar
बालेन दाइले पिच गर्दिन्छन् रोड... भन्ने प्यारोडी गाना खुब चल्यो टिकटकमा। बालेनको सित्तैमा चुनाव प्रचार भो। मूलधारे मिडिया, सोसल मिडिया जताततै बालेनै बालेन लहर छायो। सब हेभिवेट भनिएका उम्मेदवारलाई ट्वाँ पार्दै बालेनले चुनाव पनि जिते। आज शपथ ग्रहणपछि त औपचारिक रुपमा कार्यभार पनि सम्हालिसके।
बालेनले जादूको लौरो घुमाएर सब ठीक पार्दिन्छन् जस्तो भएको छ अहिले सबलाई। अरुको कुरा छाड्दिउँ, पत्रकारहरु नै बालेनका फ्यान भएका छन्। चुनाव प्रचारदेखि नै बालेनको एउटा एजेन्डा थियो- महानगरका बैठक लाइभ गर्दिने। आज पहिलो पटक बैठक बस्यो र त्यसको लाइभ गरियो। बालेन क्रेजलाई क्यास गर्नका लागि भएभरका अनलाइन मिडियाले आफ्नो फेसबुक पेजबाट त्यसलाई लाइभ हान्दिए। तर, बालेनलाई मात्र चिनेका पत्रकारहरुले बैठक केको थियो भन्ने भेउ नै पाउन नसकेको देखियो। बैठक नगर-कार्यपालिकाको थियो। त्यो भनेको के हो थाहा पाउन संविधान पढ्नु पर्छ।
रातोपाटीको फेसबुक लाइभमा लेखिएको थियो – काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो नगर सभा बैठक लाइभ।
यो गलत हो। नगर सभा भनेको मेयर अध्यक्ष, उपमेयर उपाध्यक्ष रहने र महानगरका सबै वडाध्यक्ष र सदस्यहरु र उनीहरुले निर्वाचित गरेका तीन जना दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य (निर्वाचन गर्न बाँकी छ) सहितको १६५ सदस्यीय सभा हो। संघको व्यवस्थापिका अर्थात् प्रतिनिधि सभा भनेको जस्तो। यसको पनि अधिवेशन डाकिन्छ, प्रस्ताव, विधेयक पेश हुन्छन् र बहुमतले पारित हुन्छ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषित भएको एक महिनाभित्र अध्यक्षले नगर सभाको अधिवेशन डाक्नु पर्ने व्यवस्था छ। नगर सभाको अधिवेशनै डाकिएको छैन, कसरी नगर सभा बैठक हुन्छ?
तर नेपालखबरको फेसबुक पेजमा पनि नगर सभाको बैठक लाइभ नै लेखियो।
उता अर्को अनलाइन देशसञ्चारले भने नगर सभा होइन, नगर समिति बैठक भनेर लेखेको रहेछ।
यो त झन् संविधान मै नभएको कुरा हो।
संविधानमा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारका लागि नगर कार्यपालिका र स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार नगर सभामा निहीत हुने बनाइएको छ।
यो नगर समिति भनेको कहाँबाट आयो, देशसञ्चारका पत्रकारलाई नै गएर सोध्नु पर्ला।
नगर कार्यपालिका अन्तर्गत वडा समिति त हुन्छ तर नगर समिति चाहिँ हुँदैन।
त्यस्तै राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिकाको फेसबुक पेजमा भने नगर परिषद्को बैठक लाइभ लेखिएको रहेछ।
नगर परिषद्को व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छैन।
संविधानमा नगर कार्यपालिका र नगर सभा दुई वटा मात्र छ। त्यसैले यो पनि गलत भयो।
संविधान मै नभएको नगर परिषद्को बैठक राख्ने अरु अनलाइनमध्ये एक हो- फरक धार।
त्यसैगरी काठमान्डुप्रेसले पनि नगर परिषद्को बैठक भनेर नै लेखेको रहेछ।
न नगर सभा, न नगरपरिषद्- नगर कार्यपालिकाको बैठक थियो त्यो
खासमा सोमबार बसेको बैठक नगर कार्यपालिकाको थियो। यो भनेको स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार भएको अर्थात् संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् जस्तो ठाउँ हो। यो ४२ सदस्यीय हुन्छ। नगर कार्यपालिका पूर्ण भइसकेको छैन।
यसमा अहिलेसम्म मेयर, उपमेयर र ३२ वडाका अध्यक्षहरु मात्र निर्वाचित भएका छन्। अब यसमा नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत गरी ८ जना सदस्य आउन बाँकी छ। त्यसको निर्वाचन हुन बाँकी छ।
अहिलेसम्म नगर कार्यपालिकामा १९ नेपाली कांग्रेस, १३ एमाले र एक समाजवादी र एक स्वतन्त्र (मेयर आफै) निर्वाचित भएका छन्। नगरसभामा बहुमत रहेकोले बाँकी ८ जना सदस्य पनि कांग्रेसकै निर्वाचित हुने देखिन्छ। हेर्नुस् पहिलेको र अहिलेको नगर कार्यपालिकाको स्थिति चार्टमा (तल नखुले यहाँ क्लिक गर्नुस्)
अहिले त मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरु मात्र बसेका हुन्। नगर कार्यपालिका पूर्ण नभइसकेकाले परिचयका लागि मात्र औपचारिक बैठक बसे पनि हुनेमा लाइभ गरेर एजेन्डामा नभएका विषयवस्तु निर्णय भयो भनेर सिइओ लोकनाथ पौड्यालले भनेपछि केही छिन बबाल भएको लाइभमा देखिएको थियो। (स्पष्टीकरण : खासमा उनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् CAO तर महानगरको वेबसाइटमा उनको इमेल ceo भनेर राखिएको कारणले उनले आफूलाई सिइओ भनेरै चिनाउन खोजेको देखेर त्यही लेखियो है)
महानगरपालिकाका सिइओ संघीय मन्त्रालयले खटाएको हुन्छ। नगर कार्यपालिकाको बैठकमा छलफलै नभई सिइओले पास भयो भनेपछि वडाध्यक्षहरुले आपत्ति जनाउँदै त्यो शब्द फिर्ता लिन लगाएका थिए। गोलाप्रथाबाट फोहर जेट मेसिनले सफा गर्ने, फोहर समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाउन दलीय हिसाबले सदस्य माग्ने जस्ता कुरामा पनि आपत्ति जनाइएको थियो। सिइओले त्यसपछि मैले फिर्ता लिएँ भन्दै माइक मेयरलाई दिएका थिए। बैठक सञ्चालन गर्ने तरिका सिक्न पनि वडाध्यक्षहरुले सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि मेयर बालेनले प्रत्येक प्रस्तावलाई पेश गर्दै पारित गराएका थिए।
यो भिडियोको अन्तिममा हेर्न सक्नुहुन्छ बबाल भएको दृश्य-
हुनत सबै कुरा थाहा हुनुपर्ने पत्रकारलाई नै केको बैठक थाहा रहेनछ, इन्जिनियर पेशाका मेयरलाई बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने त्यति मेसो नपाएको हुनसक्छ। तर यस्तोमा सघाउनु पर्ने कर्मचारीतन्त्रले हो। तर अहिलेका महानगरपालिकाका सिइओ लोकनाथ पौड्याल त विवादमा पर्न खप्पिस रहेछन्। केही उदाहरण हेर्नुस्-
किन विवादमा तानिइरहन्छन् सचिव पौड्याल ?
यस्तो थियो सचिव लोकनाथ पौड्यालको लीला
आजको लाइभ हेरिरहेका बालेनका फ्यानहरुले कमेन्टमा वडाध्यक्षहरुलाई भक्कु गाली गरिरहेको देखिएको थियो। बिचरा ती वडाध्यक्षहरुले त प्रक्रिया अनुसार बैठक बस्नुपर्ने र निर्णय पारित गर्नुपर्ने विधिको कुरा न उठाएका थिए। महानगरपालिकाको वेबसाइटमा जननिर्वाचित मेयर र उपमेयरकै हैसियतमा ठूलो फोटो टाँस्ने सिइओ सचिवले पो त्यसरी मिलाएर गर्नुपर्ने हो त। पहिलो गाँस मै ढुंगा। यस्ता कर्मचारी र वडाध्यक्षका बीचमा मेयरले कसरी आगामी दिनमा काम गर्ने हुन्, हेर्न बाँकी छ।
वडाध्यक्ष किन भनेको भने नि, फूर्सद भए माथिको भिडियो हेर्नुस्- त्यसमा एक जना वडाध्यक्षले रेस्टुरेन्टको शौचालय सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने भन्नेलाई कसरी बुझेका रहेछन् अनि कल सेन्टर भनेको वायरलेस हो कि तारवाला, तारवाला त मेरो वडामा बाँदर हुन्छ, राख्न दिँदैनन् भनेको 🙂